Kismaayo News » Xildhibaan Maxamed Shuuriye oo la kulmey dhalinyaradda Jubbaland
Xildhibaan Maxamed Shuuriye oo la kulmey dhalinyaradda Jubbaland
Kn: Xildhibaan Maxamed Cusmaan Shuuriye ayaa noqdey xildhibaankii ugu horeeyey oo la kulmo qeybaha kala duwan bulshada kasoo jeeda Jubbooyinka ee ku dhaqanka Kenya.
Xildhibaanka ayaa la kulmey ururka dhalinyaradda Jubbaland Youth Leage, iyagoo ka wada hadalay sidii isku xir ay u yeelan lahaayeen xildhibaanada gobolka matala iyo qeybaha kala duwan oo ay dhalinyarada ka midyihiin.
Ururka JYL oo ay horkacayeen Gudoomiye Qadar Buule , Sharmaarke Wali, iyo Nimco Xassan Kabare ayaa waxa ay xildhibaanka u gudbiyeen baahida dhalinyarada gobolka, gaar ahaan xag waxbarasho, shaqaaleyn iyo dhaqancelinta kuwa dagaalada halakeeyeen.
Ururka ayaa ka cawdey in iyada oo dowladaha aduunka ay Soomaaliya siiyaan deeqo waxbarasho, hadana nasiib daro ardayda gobolka aysan waxbo ka helin deeqahaasi waxbarasho, taasina ay ugu wacantahay dadkii gobolka dowladda u matalayay oo ka gaabiyey.
Xildhibaan Shuuriye oo hadalo baraarujin ah u jeediyey dhalinyaraddii la kulantay ayaa sidoo kale u balanqaaday in intii karaankooda ay samayn doonaan, mar dambana aysan dhici doonin in wax Soomaali oo dhan ka dhaxeeya ay cid gaar ah isla buusto.
Waxa uu sheegey in xildhibaanadda baarlamaanka ee Jubbooyinka ay leeyihiin gudi, waxyaabaha ay maanka ku hayaana ay ka midyihii shaqaaleynta wasaaradaha dowladda, kooxaha isboortiga ee tartamaha aduunka ka qeybgalaya, mashruucyada dhaqancelinta iyo isdhaxgalka, iyo deeqaha waxbarasho intuba in ay dhalinta gobolka wax ka helaan.
Waxa uu dhalinyarada gobolka ku amaanay in ay yihiin kuwa wax bartay badankood, shaqaysta, islamarkaasina aanan ka qeybqaadaninin dagaaladii sokeeye, sidaasi darteedna lasoo gaaray xiligii abaalmarin ay heli lahaayeen.
Farxaan Axmed Sahal, gudoomiye ku xigeenka JYL ayaa sheegey in aysan horey u jiri jirin xildhibaan deegaanka baarlamaanka ugu jira in uu soo raadiyo oo uu u imaado, lana kulmo dadka deegaanka, kana dhagaysto cabashadooda iyo baahida ay qabaan, talaabadan uu xildhibaanka kula kulmey ururkani uu rajeeyey in ay noqoto mid ay ku daydaan xildhibaanada kale.
Ururka ayaa ugu baaqay gudoomiyaha xildhibaanada Jubbaland ee baarlamaanka ku jira, Jeneraal Muuse Xassan Cabdulle in uu ka shaqeeyo sidii wax looga qaban lahaa baahida badan ee ay dhalinyarada qabto iyo waxa ay dowladda ka qaban karto, maadaamaa iyaga ay yihiin kuwii loo doortey in ay ummada matalaan.